Arinka Ku Saabsan Zlatan Ibrahimovic Ee Marcos Rojo Daboolka Ka Qaaday Isla Markaana Hore Loo Maqal Muxuu Ahaa? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Difaacii hore ee Manchester United ee Marcos Rojo ayaa daboolka ka qaaday arrin aanay cidina hore ula soconin oo gudaha garoonka Old Trafford ku dhex martay Zlatan Ibrahimovic oo ay isku koox ahaayeen.
Ibrahimovic ayaa xili ciyaareedkii 2017/18 waxa uu u ciyaaray Manchester United, waxaanay ku dhamaysteen kaalinta labaad ee miiska kala sarraynta, iyadoo uu waqtigaas tababare u ahaa Jose Mourinho.
Inkasta oo aanay horyaalka hananin, haddana ma ahayn xili ciyaareed fashil ah, sababtoo ah, waxa uu Ibrahimovic kula guuleystay koobka Europa League oo taariikhda u galay Mourinho iyo Zlatan labadaba.
Xili ciyaareedkaas, waxa xurguf ay gudaha garoonka ku dhex martay Ibrahimovic iyo difaaca reer Argentine ee Marcos Rojo, waxaana ay arrintoodu ka bilaabantay kubbad uu Ibra codsaday in isaga loo baaso oo uu Rojo la doontay Paul Pogba.
“Zlatan wax auu leeyahay dhaqan adag, Ezequiel Lavezzi ayaa hore iiga sii digay.” Sidaas waxa yidhi Rojo oo u warramay Cielo Sports.
Rojo oo arrintan ka sheekaynaya waxa uu hadalkiisa sii raaciyey “Waan ogaa in uu doonayo in dhamaantayo aanu kubbadaha isaga uun siino, laakiin anaga oo ku wada jirna ciyaar, ayaan arkay isga oo i weydiisanaya inaan kubbad siiyo, aniguna umaan dhibin isaga. Waxa aan u baasay Paul Pogba. Kaddib waxa uu bilaabay inuu igu qayliyo, gacmaha igu saydhiyo, isaga oo ku dhawaaqaya ereyo waxyaabo badan oo luuqadaha Spanish iyo English ah.
“Waxa aan ku idhi: “Maxaa kaa khaldan San-weynow? Afkaaga xidh…”
“Waan garanayay in haddii uu i qabto, in uu i dili doono markaa waxa kaliya ee aan samayn karayay waxay ahayd inaan waajaho. Markii uu qolka labbiska soo galay, si toos ah ayaan ugu sheegay in uu afkiisa xidho oo uu qaylada joojiyo.
“Waxa aanu bilownay inaanu is cayno iyadoo dhamaan ciyaaryahannada kalena na daawanayaan. Meel dhexe waxa joogay Jose Mourinho oo isku dayayay inuu na dejiyo.”
Barnaamijka Bandhige:- Dhalinyaradu Somalilaan Siday Ugu Liseen Looguma Hambayn?